Analytical + Creative = Fahombiazan'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Analytical + Creative = Fahombiazan'ny haino aman-jery sosialy
Alatsinainy Aprily 20, 2009 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny fahombiazan'ny media sosialy? Rehefa manohy mitombo amin'ny asa isika dia mitady talenta ary mila fifangaroana mety.
Mpianatra matematika mendri-kaja ny zanako lahy… ary mpitendry zavamaneno. Ny zanako vavy dia mpihira… ary matematika. Tena mandinika aho… fa tiako ny mamorona amin'ny asa soratako sy ny endriko. Azo antoka fa lakilen'ny fahombiazana ho an'ny zanako lahy sy vavy ny mozika. Tsy mpitendry zavamaneno aho, fa ny fialamboly noforoniko izay nataoko dia nanampy ny fahombiazako. Mino aho fa ny fampiharana ny fahaiza-mamorona ivelan'ny asanao dia manampy rehefa mamakafaka sy mamaha olana amin'ny asanao - izany dia mitarika amin'ny fahombiazanao.
Tsy mihevitra ny tenako ho toy ny an manam-pahaizana amin'ny haino aman-jery sosialy saingy nanana traikefa ampy tao aho hanampiana ireo orinasa mitarika ny sehatry ny fitrandrahana sy hanampiana azy ireo manararaotra ireo mpanelanelana mifandraika amin'izany. Saika isan'andro aho miasa amin'ny lahatsoratra bilaogy, fampisehoana, kabary, famolavolana mailaka ary famolavolana tranonkala. Ny tsirairay amin'izy ireo dia famoronana famoronana ho ahy.
Raha te handahatra ny fotoanako aho dia mamorona ~ 50% ary ~ 50% stratejika / famakafakana. Tsy azoko antoka fa mety ho toy izany koa aho famoronana amin'ny vahaolana miasa miaraka amin'ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa amiko raha tsy manana karazana fivoahana izay nitaky ahy hanao fanazaran-tena isan'andro. Feno fankasitrahana aho fa nahazo fanamby tsy tapaka hahita vahaolana mamorona - na ny famolavolana interface tsara ho an'ny mpampiasa na ny teny amin'ny lahatsoratra bilaogy mampiala voly.
Rehefa mijery ireo namako maro ao amin'ny orinasa mahomby aho, dia manana famoronana famoronana mitovy. Maro amin'izy ireo no samy manao fampandrosoana sy famolavolana sary. Ny sasany dia mpitendry zavamaneno ary ny sasany mpaka sary. Vitsy ny atleta… fa tsy mpanao fanatanjahan-tena tsotra, vatan-drano fotsy, mpihaza hazakaza-tsoavaly na mpihazakazaka hazakazaha. Tsy azoko an-tsaina ny famoronana takiana mba hahafahan'ny vatanao manosika ireo fanamby ireo.
Mahagaga ahy foana ny maheno izay ataon'ny namako any ivelan'ny azy asa. Betsaka ny olona no tsy manavaka ny lafiny famoronana asako sy ny famakafakana, saingy azo antoka fa zavatra azoko natao ny niditra an-tsehatra. Fantatro rehefa mampiasa vahaolana amin'ny karazana fisainana tsirairay aho hanampiana amin'ny famahana ny iray hafa ary mila ataoko matetika be izany. Mila fanazaran-tena tsy tapaka sy fanitsiana tsara.
Ny 99% amin'ny fotoana, amin'ny zavatra niainako, ny ampahany sarotra amin'ny famoronana dia tsy tonga amin'ny zavatra mbola tsy noeritreretin'olona hatrizay. Ny ampahany sarotra dia ny fanatanterahana ilay zavatra noeritreretinao. Seth Godin
Tiako ny mpamaky an'ity lahatsoratra ity hizara ny lafiny noforonin'izy ireo ary na ny bilaogy na ny fanehoan-kevitra momba ny fiantraikan'ny fahombiazany amin'ny fahafahany manatanteraka ny andraikiny amin'ny asany. Azafady zarao!
Super Crunchers avy amin'i Ian Ayres
LOHA HEVITRA… Fambara miafina ankehitriny!
Apr 20, 2009 ao amin'ny 11: PM PM
Raha vao nanomboka ny asako aho dia nandany ny androko nanoratra sy nitarika zava-kanto tamin'ny mailaka mivantana. Tena matsilo saina. Avy eo amin'ny alina, manoratra programa database aho mba hanarahana ny valin'ny mailaka ho an'ireo mpanjifako tsy mitady tombombarotra izay tsy mahazaka ny fonosana fanangonana vola namboarina tamin'izany fotoana izany. Tena ati-doha ankavia.
Taty aoriana, rehefa tsy dia nirotsaka loatra tamin'ny lafiny famoronana valiny mivantana izahay mivady dia nanoratra sary an-tsary iray ho an'ny gazety iray isan-kerinandro (ny Milwaukee ao amin'ny "The Reader" any Chicago, antsoina hoe Milwaukee Weekly). Nataoko daholo ny fanaovana sary an-tsary.
Nahaliana ny mahita hoe isaky ny inona aho no manandrana mampifangaro ireo karazana hetsika roa. Anisan'ny antony anaovako izay ataoko izao na dia tsy nahazo karama aza aho.
Misaotra nitondra ity lohahevitra mahaliana ity (ho ahy farafaharatsiny!). Manantena ny zavatra ataon'ny hafa aho mba hanonganana ny fihantonana mamorona sy hamakafaka!
Apr 21, 2009 amin'ny 10: 40 AM
“Hataoko izay ilako fivelomana na dia tsy voaloa aza aho.” - izay no milaza azy rehetra, Jeff! Mieritreritra aho fa ao anatin'ny toe-javatra toy izany aho… na dia mila manao zavatra handoavana ny faktiora aza aho. 🙂
Apr 21, 2009 amin'ny 8: 35 AM
Mpamorona sary aho amin'ny antoandro, fa mandritra ny volana Janoary-aprily dia mandray asa faharoa aho amin'ny fandoavan-ketra. Satria samy hafa tanteraka izy roa dia tsy reraka amin'ny ati-doha aho toy ny hoe manana asa tapa-potoana manao zavatra hafa mitovy amin'ny asa ataoko anio.
Rehefa mamolavola zavatra iray aho, ny fampiasana ny lafiny roa amin'ny atidoha dia manampy ahy ho azo ampiharina sy hamorona. Nahatonga ahy ho sarobidy koa io tao amin'ny birao, afaka manome sosokevitra izay afaka manampy amin'ny orinasanay aho, saingy tsy dia mahazatra loatra hanomezana antsika sisiny.
Apr 21, 2009 amin'ny 10: 39 AM
Tena mahavariana izany - mazava ho azy miaraka amin'ny kaody haba, tsy maintsy mitaky famoronana kely (fa tsy be loatra!).
Apr 22, 2009 ao amin'ny 9: PM PM
Miara-miasa amin'ny teknolojia aho, fa mpitendry mozika koa aho. Heveriko fa ny fahafahako mamoaka ny heriko mozika dia manampy amin'ny fanadiovana ny fifantohako ary ahafahako miasa amin'ny fomba mahomby kokoa.